Allgedo.com » Diyaarado duulimaadyo xaga ganacsiga iyo safarka dadka ka bilaabay Muqdisho iyo Dolow (Dhageyso wareysi)
Diyaarado duulimaadyo xaga ganacsiga iyo safarka dadka ka bilaabay Muqdisho iyo Dolow (Dhageyso wareysi)
Print here| By: allgedo.com: Saturday, January 19, 2013 // 1 Jawaab
Dolow, Somalia (AOL) – Diyaaradani ka bilowdey Duulimaadyada Caadiga ah ee Xaga Ganacsiga iyo Rakaabka dadka oo ka mid ah Shirkadaha Diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa dhowaan waxay Duulimaadyo ay ku tageyso Todobaadkiiba mar ay ka bilowdey Magaalooyinka Muqdisho iyo Dolow, iyadoo dadka ku dhaqan Gobolada Gedo iyo wadamada Deriska sida Ethiopia iyo Kenya.
Shire Cabdi Xasan (Shire Coley) oo ah Iskuduwaha Wasaarada Caafimaadka Gobolka Gedo oo la hadlayey Warbaahinta, isagoo ku sugan Dolow kana mid ahaa Rakaabkii Muqdisho ka soo raacay Diyaarada ayaa sheegay in dadku ay si weyn ugu diirsadeen Diyaarada oo Todobaadkiiba mar tagta Dolow,waxuuna xusay in Bahidu ay sii kordheyso maalinkastaaba.
Shire Coley ayaa waxaa uu intaasi ku darey Diyaarada oo qaada Rakaab dhan ilaa 35 ruux in ay u socoto Muqdisho iyo Dolow mudo hal Saac ah, isagoona sheegay Diyaaradu in muqdisho ay ka qaado Alaabo Ganacsi oo ay ka mid yihiin Sigaar, Dhar iyo Alaabooyin kale.
Talaabadani oo si weyn ay u soo dhaweeyeen Mas’uuliyiinta iyo Shacabka ku dhaqan Gobolada Gedo, Banaadir iyo Magaalooyinka kale ee ku yaala xadka labada Dal oo iyagu dhibaatooyin xoogan ku qabay safarka iyo Ganacsiga Wadada dheer ee isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Dolow, xaga Amaanka iyo wadadaasi oo bur bursan Aawadeed ayaa waxay sheegeen in arintani wax weyn ay ka tareyso.
Halkaan ka dhageyso wareysiga Shire Coley
Cabdi Faarax, Allgedo/Muqdisho.
1 Jawaab " Diyaarado duulimaadyo xaga ganacsiga iyo safarka dadka ka bilaabay Muqdisho iyo Dolow (Dhageyso wareysi) "
Arturo Mills says:
Sheekh Cabdirashid Sh.Ali Suufi oo maanta soo boqdey masjidka Österängen kuna booriyey ummada islaamka iney ka qeyb qataan gadashada masjidkan sawirkiis meesha ka muuqdo iyo faa’idada ay leedahay dhisida masaajiyada.